« Milalaoo »: niampy iray ny toeram-pialamboly | NewsMada
Efa tafiditra ao anatin’ny filàna ho an’ny tsirairay ny fialamboly. Miezaka ny mamaly izany ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny. Anisan’ireny ny etsy amin’ny Akoor’Digue ka nanorina ny toeram-pialamboly “Milalaoo”.
Sambany no nisy eto Madagasikara ! Nampahafantarina ny mpanao gazety, omaly, ny fisian’ny « Milalaoo » toeram-pialamboly iray vaovao eny amin’ny Akoor’ Digue. Manana fivelarana amin’ny sehatra iraisam-pirenena izy ity raha ny fotodrafitrasa hita teny an-toerana. « Anisan’ny kendrena manokana hilalao sy hiala voly eny an-toerana ny Malagasy », hoy Andriamiarintsoa Josceline Yvonne, tompon’andraikitry ny serasera eo anivon’ny Akoor’ Digue.
Mahatratra 25 ireo karazam-pialamboly afaka atao ao amin’ny « Milalaoo ». Azo sokajiana roa izy ireo. Ao ireo lalao ivelan’ny trano sy ireo kilalao ao anaty trano. Anisan’ireny ny swing (chaise volante), ny jumping frog, ny pendulum, bumblebee car (voiture Ferrari), ny châteaux gonflables, ny escalades, ny robot rotation sy ny outrun racing, ny motor game, ny crazy crocodile, ny small bowling, ny basket ball game et mini basket ball game, ny boxing game, ny the king of the hammer, ny hunting zone, ny big soccer, ny bicycle ride, ny hockey game, ny pandora’s box fighting game, ny crazy toys game, ny kiddie ride, ny shooting machine game.
Anisan’ny mampiavaka ny toeram-pialamboly « Milalaoo » ny fampiasana ny « carte ». « Rehefa manana karatra amin’ny anaranao ianao, mampiditra fahana rehefa hilalao », hoy hatrany ity tompon’andraikitry ny serasera ity. Nohamafisiny hatrany fa « natao sahaza ny rehetra ny lalao sy ny fialamboly eto. Noho izany, raha fianakaviana manontolo (zaza, ankizy, tanora, lehibe) no mankaty, afaka mandray anjara avokoa ». Ny 7 desambra izao no hisokatra amin’ny fomba ofisialy ity toeram-pialamboly vaovao ity.